Jeans marevaka amin'ny lamaody - mainty, manga, mavo, miboridana, fohy, misy tavy ambony, jog
Jeans tafahoatra - iza no mandeha amin'ny akanjo sy ny fomba famoronana sary maoderina?
Manaova akanjo fotsy vavy iray, aza hadino ny singa manan-danja toy izany ho toy ny jeans mamirapiratra. Manasongadina ny fifandraisana amin'ny vehivavy eo amin'ny tongony mendri-kaja, mampiseho tsara azy ireo izy ireo ary ankoatra ny tsy fisian'ny taona voalohany ny lamosin'ny kavin'orona.
Iza ireo jeans henjana?
Ny endrik'i Jeans dia saika ny zava-drehetra: antitra sy tanora dia mahatsiaro ho tsara, mahazatra ary lamaody. Ny sira rehetra dia ny mifidy modely iray izay afaka mamolavola ny vatanao, ary tsy manasongadina ny fahadisoana. Ity fehezan-dalàna ity - lamaody ho an'ny jeans henjana - dia manolo-kevitra ny hanavao ny fanangonana ny pataloha miaraka amin'ny kopia vaovao. Amin'ity tranga ity, ny jeans mitovitovy, miaraka amin'ny fitambaran-tarehy tonga lafatra amin'ny karazana garderie hafa, dia tsy ho an'ny rehetra.
Na dia natao hampiasa azy ireny aza izy ireo, mampiseho ny tsy fahitana mazava:
Iza no afaka milamina tsara, noho izany dia zazavavy mendri-kaja tsara tarehy izy ireo.
Aza manahy sy mahafinaritra amin'ny vidiny fanampiny, fa amin'ny teny hoe "andriamby".
Ao amin'ny sary "apple" sy "triangam-pifamoivoizana" dia mety hiankin-doha amin'ny tebiteby ny lohan-dindo kely iray, ka amin'io lafiny io dia ilaina ny mifidy akanjo tsara.
Miaraka amin'ny vala feno sy kitrokely tery "pear" dia mifanohitra amin'ny jeans kely.
Hafiriana no tokony hipetrahan'ny jeans?
Raha tokony ho tonga eo afovoan'ny voditongotra ny lava-pirazanana tsotra, dia tsy manaiky io laingon-dite io ny jeans. Na sarotra alaina sary an-tsaina hoe toy ny satroka marevaka, miparitaka ny kiraro avo kiraro. Ny fitsipika volamena ho an'ny fanovozana jeans dia ny hoe ny sisiny amin'ny tongotra dia tsy maintsy manatona ny tongotra tsy manarona ny tongotra.
Ny fijerena ny lanjany marina dia mora: rehefa mitafy ny kiraro, ny kibon'ilay tongotra sy ny lamosina dia mifandray na mifanakaiky iray santimetatra. Ny endriky ny "accordion" noho ny fitaovana tafahoatra ao amin'ny faritra ankavanana dia tsy azo ekena. Raha toa ka manana fiovaovana fohy eo amin'ny 7/8 ny modelinao dia mety hahatratra ny faritra eo amin'ny ankilany eo amin'ny palmie ny halavan'ny tongotra.
Jeansy mody matevina
Miaraka amin'ny tapa-damba tena izy sy ny fihenan-damba dia mihazona ny bar. Jeans marevaka marevaka eo anatrehan'ny tarehimarika tsara tarehy - karatra trompetra ao amin'ny manodidina. Izy ireo dia tsara amin'ny fomba ofisialy amin'ny kiraro na mpitsikilo tsara, rehefa mampionona ny vato fehizoro. Ny sary misy volo sy marevaka marevaka - vahaolana tsara ho an'ny fety amin'ny klioba na fanendrena romantique.
Ny sendikà miaraka amin'ny boots maingoka sy ny jiron'ny hoditra dia ahafahana mamorona lamaody lamaody sy malaza. Na dia izany aza, ireo tovovavy manana endrika jeans dia afaka mijery samihafa, satria maro ireo fiovana maro:
Modely amin'ny tendron-tsoroka avo lenta - fiverenana tsara amin'ny firotsahan'ny 90 taona.
Ny fahafahana sy ny fahafaham-po dia manome vokatra rovitra.
Ny sary mahaliana dia mora ny mamorona, ka ao amin'ny arsenal ny skinnel fohy.
Hatramin'ny taon-dasa, mbola mijanona ny loko mihintsy.
Ankoatra ny manga manga sy malefaka, ny poketra dia azo amarinina miaraka amin'ny satroka marevaka maivana amin'ny mainty mainty.
Ny antsipiriany kely toy ny vavahady dia mety ho fototry ny tongolobe.
Jeans tafahoatra miaraka amin'ny tavy ambony
Ny fironana mahaliana momba ny famolavolana avo dia nikasika sy jeans manerantany. Jeans lava miaraka amin'ny tandroka manify, izay mahatratra ny tavy na tratrany ambany ny sisiny, tena mangataka. Ity môdely ity dia manitatra ny tongotra, toy izay manantitrantitra ny fahamoram-po sy ny fiavonavonan'ireo tsipika. Ilaina ny manonona sy ny zava-misy azo tsapain-tanana: Fiarovana avo latsa-dranomaso no miaro ny tavy sy ny hatsiaka.
Raha misy habetsaky ny habetsaka ao amin'ny kibony, dia afaka manafina izany ny kavina maivana. Misy ny fiovàna misy:
Jereo ireo modely goavam-be miaraka amin'ny kofehy fehikibo, izay manavaka tanteraka ny tendany.
Raha mankasitraka ireo zavatra tsy mahazatra ianao dia alao ny modely amin'ny jiro eo anilany.
Tsy dia misy jeans loatra mahaliana, kely malalaka avy any ambony ary midina mankany ambany.
Raha mifandraika amin'ny maha-zava-dehibe ny akanjo mifangaro, ny safidinao dia mety ho lahatsoratra amam-bika sy loko hoditra.
Jeans Tear Narrow
Buntic, mendri-piderana, amin'ny toe-javatra sasany, manaitra hatrany ny jeans mitebiteby, mihetsiketsika. Izy ireo dia mora hita ao amin'ny talantalana sy ny fanakambanana ao am-paladian'ny tovovavy mahafinaritra sy tanora izay tsy matahotra ireo traikefa mahaliana sy mendrika. Ankoatra ny fanamby tsy manam-paharoa, ny akanjo marevaka manga, manga na manga, marevaka amin'ny voka-tsoratra, manopy ny faritra kely amin'ny hoditra, manome ny vatana ho firaisana ara-nofo sy ny toetrany. Ao amin'ny dikan-teny maotina dia ny lohalika ihany no misokatra. Raha tsy ao anatin'ny toe-tsainao ny fahamaotinana tafahoatra, dia omeo ny vokatra izay misy ny fahadisoana sy ny fanararaotana.
Jeans fohy kely
Raha misy faniriana hanasongadina ny fahalemen'ny kirarony na ny hatsaran'ny kiraro lamaody, dia ambany kokoa ny farany ambany kokoa noho ny sarin-doko matin-ketra ary sarotra alaina sary an-tsaina. Rehefa mifarana eo afovoan-damosina izy ireo dia misarika ny saina ho amin'ny zavatra etsy ambany, mametraka ny foiben'ny sary. Miaraka amin'ny fanampian'ny elatra matevina, azonao atao ny manoratra, tsy miteny amin'ny andilany, fa amin'ny lohany izay tery, toy ny serfa.
Tsara homarihina fa misy ny tsy fanarahan-dàlana toy izany - manapaka sy manely ny tongony. Ary raha tsy azonao antsoina hoe jeans lava lava, ety sy lavalava dia mifanohitra tanteraka aminao. Ny vehivavy hafa amin'ny lamaody mba hahazoana ny fandanjalanjana amin'ny sary dia afaka mampifandray kiraro amin'ny kiraro avo, kiraro maingoka na kapa eo amin'ny gorodona.
Jeans mitelina amin'ny embroidery
Tamin'ny vanim-potoana teo aloha, nahatsapa ny fahaterahana indray ny embroidery, nanjary iray amin'ireo tontolon'ny fitarihana amin'ny indostrian'ny lamaody. Ny antsipiriany momba ny famolavolana dia tsy afaka manamarika ny endriky ny aina tsy mihantitra. Marika malaza no nihevitra azy io ho fanomezam-boninahitra ny fampiasana embroidery, nopetahana amin'ny jeans kely:
Ao amin'ny modely laconic, ny embroidery dia afaka manana singa tsirairay, ohatra, eo amin'ny jirofo na eo anoloana, eo ambany, eo amin'ny sisin'ny tongotra.
Ny tranokala ihany koa dia aseho amin'ny vokatra misy ny embroidery lehibe, ny fibodoan'ny ankamaroan'ny tongotra.
Paozatra marevaka tsara tarehy, izay mampiavaka ny sarin'ny sary malemy miaraka amin'ny fahadisoana.
Amin'ny lamaody, mofomamy mena amin'ny sary manga na mainty. Jeansy mavokely malefaka dia tsara amin'ny sary mainty, fotsy ary mavo.
Amin'ny endriky ny embroidery, ny endriky ny loko, ny zavamaniry, ny vorona tsy fantatra, ny biby kely am-pitiavana, ny fampiasana an'ohatra.
Jeansy mainty maivana
Ary na dia ny ankamaroan'ireo mpanamboatra dia nanolotra ny fiaraha-miombon'izy ireo amin'ny loko manga sy manga, ny lamba fotsy manga mainty hoditra dia mitoetra ho lohalaharin'ny lamaody ankapobeny. Ny dikan-teny malaza iray dia miavaka amin'ny toetrany maimaim-poana - ny Jeans dia afaka mifangaro mora amin'ny akanjo misy loko, ary tsy manahy ny amin'ny fiaraha-miasa.
Miaraka amin'ny sary ny fampanarahan-dalana: raha ny akanjo marevaka sy ny tongony, ny fihetseham-po dia amam-pitiavana. Raha latsaka amin'ny T-shirt malalaka ny safidy dia misy mpilalao mahafinaritra sy tian'ny olona malaza - dia misy ny fialam-boly na ny fahavitrihana. Na ny fitafim-bolo amam-boninahitra sy ny bika aman'endrikao miaraka amin'ny jeans mainty matevina dia mahazo ny endriky ny hakantony sy ny fomba fijery. Noho izany, ny fividianana pataloha amin'io vidiny io dia fampiasam-bola mavitrika foana.
Jeans tafahoatra miaraka amin'ny jig
Efa hatry ny ela ny Skinny ary nanjary karazana garazy mahazatra. Mety hitodika ny kofehiny - tapaka ny sisiny. Rehefa mibaribary any ivelany ny lamba, dia matetika no samy hafa ny lokony amin'ny lokon'ny denim, ary manintona ny saina. Ny varavarana dia afaka manana sakany hafa - Jeans kely dia tsara amin'ny lamba matevina. Ny modely maimaim-poana hafa dia tsara ery amin'ny podvorotami. Ity farany dia mety misy endrika somary manify kely. Jeans tadiny amin'ny mofomamy dia mitovy amin'ny kirizy matevina sy kavina maina.
Maka toerana azo antoka ao amin'ny efi-trano ny hodiny, mampiseho fa mifanaraka amin'ny endrika samihafa ny hodiny. Ny fananana azy ireo ao amin'ny arsenal dia mora ny mamorona karazana tsipìka isan'andro. Raha miresaka momba ny zavatra atao amin'ny jeans mainty matanjaka, dia misy dikan-teny maromaro ho an'ny fampiarahana mahomby:
Ho an'ny kazhual fomba, manaova akanjo marevaka, ary afehezo ny lobaka eo amin'ny tampony. Amin'ny maha-safidy azy - sweety iray matevina amin'ny jiromety na akanjo sy fehiloha.
Ny pataloha tsy misy lamosina, tsy fahampian-tsakafo sy embroidery dia tafiditra ao amin'ny raharaha raharaham-barotra, noho izany dia azonao ampiasaina akanjo mare / akanjo marevaka sy kiraro / kiraro ary kiraro mahazatra mba hamorona ny tsipika ara-barotra.
Ny fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena dia mitaky fifaneraserana amin'ny tennis / sneakers / snikers miaraka amin'ny t-shirt / lingslive ary rivotra / jacket. Amin'ny maha-fitaovana azy dia mety amin'ny kapila fanatanjahan-tena tsotra na ny foibeny.
Tendroka maingoka miaraka amin'ny jeans matevina
Ny sary misy jeans kely
Solaitra tena mahaleotena no fototra iorenan'ny sary tsy mahazatra. Ny fametrahana ny fisainana sy ny tsirony voajanahary dia mora ny mahatsapa sary mahaliana, izay manome ny anjara andraikitra lehibe amin'ny pataloha misy tavy:
Ny mody henjana dia mifanentana tsara amin'ny foto-pisainana mihoatra ny. Miavaka amin'ny akanjo marevaka marevaka, akanjo, akanjo miaraka amin'ny jeans.
Raha te-hiala ianao ary miseho amin'ny endriny masiaka, manaova T-shirt maotina miaraka amin'ny soratra manjavozavo sy ny jaketa miaraka amin'ny scythe. Aza adino ny momba ny endritsoratra tsara tarehy amin'ny endriky ny rock diva chopper.
Raha manana akanjo lava be dia be ianao, dia sambatra izy ireo miaraka amin'ny cro-top miaraka amin'ny tanana fohy na lava.
Raha miparitaka ny antokom-pirahalalan'ny klioba, aza matahotra ny hampiasa top ambony sexy amin'ny lamba rongony, felam-boninahitra mamirapiratra mamirapiratra.
Amin'ny inona no hikolokolo jeans amin'ny ririnina?
Ny fiandohan'ny andro mangatsiaka - tsy misy antony handao ny modely jeans tianao indrindra. Izy ireo dia mety sy ao anatin'ny sary ho an'ny ririnina miloko fotsy. Amin'ny maha-ambony azy, dia misy satroka matevina matevina lehibe misy loko lehibe sy / na asymmetrika lava dia tsara, ary koa karazana sodina. Raha voafidy ity farany, dia tokony hifanaraka amin'ny akanjo hoditra izy. Satria ny akanjo ivelany dia mety tsara ho toy ny parc de demokratika / fehiloha demôkratika, akanjo mendri-piderana, ary akanjo marevaka matevina miaraka amin'ny palitao fohy na pataloha. Raha miresaka momba ny kiraro mitafy amin'ny jeans henjana amin'ny ririnina, dia midadasika ny habaka:
kiraro avo amin'ny seza lava / wedge / traktè;
Ny Skinny dia manana fahaizana tsara hanalavana ny tongony, raha toa ka voafidy ny akanjo havanana:
Ny ankizivavy manana tongotra lava be dia be dia be, ny sambo, ny sambo tsy misy kofehy, ny lobaka, ny lobaka, ny kapa.
Amin'ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana dia azo atao ny mibontsina kiraro, kiraro, kiraro, kiraro, polubotinki, chelsea.
Raha tianao ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena, ny kiraro tsara indrindra ho an'ny jeans tery dia sneakers, sneakers, ary fivoarana.
Sary nalaina amin'ny jeans kely
Blouse miaraka amin'ny flounces - inona no modely ary inona no tokony hampanaovina azy ireo?
Black Magic - ozona
Olona camphor amin'ny sofina
Mahavariana ny ririnina amin'ny ririnina - ny fitsaboana tsara indrindra amin'ny zava-pisotro matsiro vitamina
Harena an-kibon'ny ririnina - ny fomba tsara indrindra amin'ny sakafom-bary
Fehezina amin'ny tavoahangy plastika amin'ny tananao
Fanokanana ho an'ny ovulation
Kate Winslet sy Idris Elba dia hotifirina amin'ny famolavolana ny sarimihetsika manerantany
Glue for ceiling plugs
Ny tantaran'ilay akanjo
Tsy maniry i Cleavia
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny balcony sy ny loggia?